An-jatony ireo nivory hanao hetsika na dia norahonana hosamborina aza
Voadika ny 11 Aogositra 2021 4:25 GMT
Mpikatroka manatontosa hetsika sit-in mandritra ny fivoriana #Lawan ao Kuala Lumpur, Malayzia. Saripika avy amin'ny ranty Twitter an'i Centre for Independent Journalism
Mpikatroka anjatony no nandeha tao an-drenivohitr'i Malayzia, Kuala Lumpur, tamin'ny 31 Jolay hitaky ny fialan'ny Praiminisitra Muhyiddin Yassin tamin'ny fomba nitantanan'ny governemanta ny valan'aretina COVID-19.
Nametrahana tarigetra hoe #Lawan (Ady), notontosaina ihany koa ny hetsi-panoherana hitakiana ny hitohizan'ny fotoam-pivorian'ny parlematera indray sy ny hampiatoana ny famerenam-bola trosa rehetra. Ampangaina ny governemanta Muhyiddin ho mampiasa ny valan'aretina hampiatoana ny parlemanta hanamafisana ny fahefana sy hampitana fepetra henjana hampanginana sy hitandrohana ireo mpitsikera.
Be ny nanohana ny #Lawan noho izy manome akony ny lonilonin'ny Malayziana maro amin'ny fomba niatrehan'ny governemanta ny valan'aretina.
Farafahakeliny mpikatroka 20 no nampanantsoin'ny manampahefana tamin'ny herinandro, tanatin'ny fotoana nikarakarana ny hetsi-panoherana #Lawan. Tafiditra amin'izany ilay tanora mpikatroka Sarah Irdina izay nosamborina tamin'ny 29 jolay noho ny lalànan'ny fiokoana tamin'ny fandefasana sioka momba ilay hetsi-panoherana. Navotsotra izy ora vitsy taty aoriana ary nofariparitany tao amin'ny Instagram ny fisedrana nolalovany.
Tsy misy na inona na inona afa-tsy ny rindrin'ny tranomaizina misy ahy sy ny eritreritro raha miezaka ny manontany tena aho: inona no hitranga aorian'izay? Inona no hitranga raha tsy manaiky ny hamotsorana ahy ny polisy rahampitso? Ho afa-manohy ny fianarako ve aho? Mbola tsy hiova hatrany ve ny fiainako? Fa inona no dia ratsy nataoko no mendrika izao aho?
Ny ataon'ity governemanta tsy mahomby amin'ireo miady ho amin'i Malayzia tsaratsara kokoa ity no mandratra anay ry Malayzia, raha heverina fa hiaro antsika no asan-dry zareo. Izany no mahatonga anay hiady [LAWAN]
Nentina tamim-pilaminana ny hetsika #Lawan, na dia eo aza ny fandrahonana isian'ny fisamborana. Tanora ny ankamaroan'ny mpandray anjara, ary manao akanjo mainty ry zareo sy mitondra saina mainty ho fanehoana ny tsy fahombiazan'ny governemanta amin'ny fiatrehana ny krizin'ny fahasalamam-bahoaka.
Zavamisy amin'izao fotoana izao eto amin'ny Masjid Jamek LRT
Nampiharina nandritra ny dia ny hetsika sakana (tsy fifampikasohana):
12.15-12.30 Mitohy am-pilaminana tsy misy raorao ny hetsi-panoherana Lawan amin'izao fotoana izao. Mandeha ny kabary. ampahan'horonantsary avy amin'ny ekipa eny an-kianja.
Nokasaina hofaranana eo amin'ny kianja manantantara Dataran Merdeka ny dia saingy nametrahan'ny polisy sakandalana eo amin'ny araba hanakatonana izany:
10.13am – Polisy mametraka bahana amin'ny fidirana mankao Dataram. Maro ireo manao fanamiana sivily, ny sasany manao vesta. Manohy ny diany ny mpanao fihetsiketsehana manaja ny SOPs, tokony hanamora ny polisy fa tsy hibahambahana.
Izany no nanery ny mpikarakara ny #Lawan hanao hetsika sit-in indray:
Mipetraka eo amin'ny arabe fihaonan-dalan'ny Jala Raja ny mpanao fihetsiketsehana lawan noho ny tsy fahazoana ny Dataran Merdeka
Taorian'ny fihirana ny hiram-pirenena (Negaraku), niantso ho amin'ny fialan'ny praiminisitra ny mpanao fihetsiketsehana
Taorian'ny Negaraku, niantso ny hialan'i @MuhyiddinYassin ny lawan
Nifarana talohan'ny tamin'ny iray ora folakandro ny hetsi-panoherana.
Nomarihan‘ny Vaomieran'ny Zon'Olombelona ao Malayzia (SUHAKAM) ny halehiben'ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana saingy nasiany ihany koa ny polisy tamin'ny fisamborana ny mpikarakara mialoha ny hetsi-panoherana:
Raha mahatsapa tsara ny hasarotry ny toe-draharaha, maneho ahiahy ihany ny SUHAKAM amin'ny fisamborana ireo mpikarakara sy mpikatroka amin'ny fivoriana efa voaomana raha noraofin'ny polisy ny fananan-dry zareo.
Mandrisika ny manampahefana ny SUHAKAM hanamora ny fivoriana milamina amin'ny fanomezana toerana mety sy mendrika hanaovana ilay fivoriana, avy amin'izany no ahafahana manaja ny elanelana sy hanaraha-maso milamina ny fahasalaman'ny mpandray anjara.
Noderain'ny mpitarika fanta-daza ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ny hetsika #Lawan. Mankatoa ny halehiben'ny fanohanana ireo tanora mpikatroka ny zanakavavin'ny praiminisitra taloha ao amin'ny firenena Mahathir bin Mohamad.
Ry ray aman-drenin'ny mpikatroka Lawan, fantatro fa matahotra ny amin'ny fiarovana azy ireo ianareo. Saingy manao izany ho antsika rehetra ry zareo. Tokony hitehaka ho azy ireo noho ny fahasahiany isika. Aza matahotra, tsy irery ianareo. Mijoro isika rehetra ho firaisankina amin'izy ireo. #LawanIntimidasi
Naneho hevitra amin'ireo tanora nanatevin-daharana ny hetsi-panoherana #Lawan ihany koa ny vondrona firaisamonim-pirenena
Ahitana tanora maro ny mpanomana ity hetsi-panoherana ity, ary derainay ny fitiavana sy ny fanoloran-tenan-dry zareo ho an'ny firenentsika, ary tahaka izany ihany koa ny fahaiza-manaon-dry zareo amin'ny fanomanana hetsi-panoherana amin'ny fomba milamina, na dia miverimberina hatrany aza ny fandrahonana hohadihadiana, hosamborina ary hohazonina.
Nantsoin'ny vondrona ihany koa ny manampahefana hitsahatra amin'ny fanorisorenana ny mpanomana. Nilaza ny manampahefana ao amin'ny polisy fa hampiantso mpikatroka maro satria famoriam-bahaoka izay voarara amin'izao fotoana noho ny valan'aretina ilay hetsi-panoherana.